Huff na Huffington | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnụbeghị, enwere $ 105 nde klas omume ikpe imegide Arianna Huffington maka ịrere AOL mana ịnyeghị ụgwọ ọ bụla nye ndị na-ede blọgụ bụ ndị nyeere aka zụlite Huffington Post n'ime obodo ịde blọgụ dị ike. Aga m agbanye asusu nke ọgaranya na-akpata otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ijeri dollar site na azụ ndị ọzọ (ooo!)… Ma gbagoro ebe ahụ.
Dị ka nwa okorobịa nwere ihe karịrị ndị na-ede blọgụ 50 na oge na-ede blọgụ ebe a na Martech Zone, M kpam kpam kwenye na ndị na-ede blọgụ na-akwụghị ụgwọ. Ha kwesịrị ụgwọ.
Martech Zone akwusila ego na nkwado na mgbasa ozi, mana anyị na-aga n'ihu itinyekwu ego ndị ahụ n'ahịa, imewe, na mmụba n'ime Podcasting, email na video. Anyị na-aga n'ihu na-eme ka saịtị na ọsọ na nkwụsi ike ya. Ya mere… ma ọ bụrụ na ị gụọ ya niile, anyị ka na-arụ ọrụ na-efu.
Achọrọ m n'eziokwu na ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-efu ma ọ bụrụhaala na ọdịnaya anyị na-akawanye mma ma anyị na-aga n'ihu na-eto eto ọgụgụ anyị. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị edemede anyị kwadoro ka m mee ihe ọ bụla dị iche. Ekwenyere m na ha nwere ekele maka ogherepụta na ohere iji soro ndị ọkachamara azụmaahịa kacha mma n'ụwa dee ihe.
Nke ahụ kwuru, echeghị m na ọ bụ oke nsogbu. Arianna Huffington na ndị ọrụ ya nwere ike ọ dị mfe itinye n'ọrụ nchịkọta ma chọpụta ndị na-ede blọgụ na-ebugharị uru kachasị (site na okporo ụzọ) na saịtị ahụ. Ha nwekwara ike ịmalite ụfọdụ nyocha ọnụahịa dị mkpa gbasara mgbasa ozi, nkwalite, na ntinye akụrụngwa ha mere. Na mmechi, ekwenyere m na post Huffington mere nke ahụ, ọ gaara enwe mkparịta ụka maka mgbanwe nke ndị na-ede blọgụ ya bụ ndị nyere uru kachasị.
Nke ahụ kwuru, Arianna nwere nkeji iri na ise nke ijeri dollar itinye ego na nnukwu nchekwa… nke nwere ike ọ gaghị eme karịa ịkọwa usoro ọrụ ha nke onye ọ bụla kwenyere mgbe ọ na-edebanye aha. Forbes kwenyere na ọ bụ a ogologo.
Eziokwu n'ezie, bụ na e nwere enweghị ụzọ ikpe nwere ike imeri. Ọ bụrụ na ọ na-eme, onye ọ bụla nọ na Facebook ga-eji ụfọdụ ego, nyocha ọ bụla nchọta ihe na Google ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ kwa Pịa ọ na - eweta, na tweet ọ bụla nwere ike ịba uru ole na ole na tweeter - ịchụpụ ụlọ ọrụ ndị a niile nke azụmahịa. Agaghị eme eme. Oge ụfọdụ ndụ adịghị mma - nke a bụ otu oge ndị ahụ.
M na-agba ume ka azụmahịa ọ bụla pụọ ​​na ndị a free nyiwe ma bido nwere ọdịnaya nke ha. Y’oburu n’inwe ikike ide ihe ndi n’edeputa ndi mmadu na-ege gi nti, gini mere n’ime uwa ka ichoro iwepu onye dika Huffington? Emela ya! Kọcha ma rụọ ọrụ nke gị n'ime ego. Mee ntinye akwụkwọ ọbịa na ebe a na ebumnuche nke iweghachite okporo ụzọ ahụ na saịtị gị. Ọ bụ ya mere anyị ji arụsi ọrụ ike iji gosipụta ndị ode akwụkwọ anyị na ụkwụ na sidebar.
N'ezie, ọ bụrụ na AOL chọrọ ịzụta Martech Zone maka $ 250 (ma ọ bụ $ 25 nde), aga m eji obi ụtọ kenye dollar ndị ahụ nyere uru kachasị na saịtị ahụ. Ọdịnaya enweghị uru ọ gwụla ma ọ wetara ndị ọbịa. Arianna Huffington kwesịrị ịghọta uru ụfọdụ ndị na-ede blọgụ na-eweta.
All Business bụ mpaghara
Gbanwee WordPress na Amazon na W3 Total Cache